Eco Yehukama Zvigadzirwa Vagadziri - China Eco Yehukama Zvigadzirwa Fekitori & Vatengesi
Chikafu chinogadzirwa nemidziyo
Shanghai COPAK yakavambwa muna 2010. Uye edu makuru zvigadzirwa ndeye PET makapu, PET mabhodhoro uye PET chikafu midziyo. Kunze kwekunge isu takagadzirawo zvigadzirwa zvePLA. Asi ikozvino mazuva, Eco zvigadzirwa zvine hushamwari zvinonyanya kudiwa kuchengetedza nharaunda. Sakachikafu chinogadzirwa nemafuta zvinopihwa nesu. Kraft bepa mbiya, zvigadzirwa zvinogadzirwa nemidziyo kubva pashuga kondo kana chibage starch zvichingodaro.
Chigadzirwa Keywords Pepa Saladhi Bowl; Kraft bepa mbiya; Saladi bepa mbiya; Saladi kraft bepa mbiya
Feature Pe bemhapemha; PLA bemhapemha; Aluminium pepa pepa mbiya
Kudhinda Matt Lamination / nekusimbisa, nebefu / Glossy Lamination / goridhe foil
Nguva yekuendesa 15-25mazuva
Kugadzira zvinhu 50pcs / bhegi, 10bag / ctn
Kutumira Chiteshi Shanghai, Ningbo
Nguva yekubhadhara 30% T / T pamberi, chiyero pamusoro peBL kopi.
Tsika mapepa mbiya
Tsika mapepa mbiya zvakagadzirwa kubva pabepa uye PE / PLA / aruminiyamu yekunamatira liner. Mabhodhoro emapepa eCopak anogona kuve akaenzana kune akasiyana saizi, mavhoriyamu, maumbirwo, mavara uye logo kudhinda. Tsika mapepa mapepa akagadzirirwa kurongedza Rice, Noodles, Fruits Dessert, Yogati, Frozen, Chikamu, sipo dzinopisa, ndiro dzinopisa uye zvichingodaro.
COPAK kutsigira tsika yakadhindwa PLA makapu.Vatengi vanogona kuisa mukombe wavo mumhando, mavara, mavhoriyamu, logo yakadhindwa uye zvimwe zvinhu. COPAK vakasangana mainjiniya, chakuvhuvhu kusimukira michina, vashandi vane hunyanzvi uye UV-screen yekudhinda muchina. Zvese zvaunoda zvinogona kugutsikana muCOPAK.
Kraft bepa mbiya. Inodanwa zvakare kunge inoraswa pepa mbiya, pepa mbiya kana Biodegradable chikafu chinogadzirwa.Iyo inogadzirwa kubva pabepa uye PLA / PE mapurasitiki nealuminium kupfeka. Iyo inowanzo gadzirwa seyakatenderera chimiro uye yeCOPAK's kraft bepa mbiya anokodzera masobho, stews, pasta, masaladi, zviyo zvakabikwa, pamwe neice cream, nzungu, michero yakaomeswa nezvimwe zvigadzirwa. Kusunungura kusagadzikana uye kwete kuremara. Izvo zvinokwanisika kuisa yakashambadzirwa kudhinda.
Pepa mbiya nemabhodhi
Compostable bepa Mabhodhoro ane Lids - 100% Biodegradable. Midziyo yemapepa eShanghai COPAK inosarudzika nemhando dzakasiyana uye saizi. Mabhodhoro edu epepa akagadzirwa neKraft bepa kana chena bepa. Ose ari maviri anogona kumisikidzwa ne PE / PLA / Aluminium kupfeka. Uchireva zvivharo, unogona kusarudza pepa muvharo, pp muvharo, OPS muvharo kana PET muvharo.
Kunze kwePET chinwiwa makapu, midziyo yekudya uye mabhodhoro emuto wePET, COPAK zvakare inyanzvi muCompostable PLA mabhodhoro. Tinogona kugadzira, kugadzira zvigadzirwa zvitsva, zvakajairika zvibereko uye kutengeserana kwepasiresePLA mabhodhoro nehunyanzvi zviitiko. Kugadzira kwedu kunotanga kubva pakuisa chigadzirwa dhizaini, kugadzirwa kweforoma, kuumbwa kwevhu, kudhinda jekiseni, kudhinda, kunyora kunyorera uye kurongedza uye kutumira. PLA nguwani dzePLA mabhodhoro iri zvakare yesarudzo dzakasiyana siyana.
Shanghai COPAK indasitiri Co, Ltd. inopa premium mhando Biodegradable PlA Bhodhoro muChina. Yedu Compos-tafura PlA mabhodhoro epurasitiki anozivikanwa zvakanyanya pakati pevanounza kunze nevashambadzi pasi rese. Inowanikwa muChina uye inoshanda chete mukugadzirwa uye kutengeswa kwePLA Mabhodhoro, COPAK inogona kuburitsa zvigadzirwa zvemhando yepamusoro uye nekupa hunyanzvi hwekushambadzira kwenyika. Isu tiri vatengesi vakanyanya PLA bhodhoro muChina.
MuCOPAK, mapepa edu embiya ndeemhando dzakasiyana muhukuru, mavhoriyamu uye mashandisiro. Izvo zvine microwavable, inodonhedza-proof uye mafuta anodzivirira. COPAK’s bepa mbiya ine imwechete PE yekupfeka, mbiri Pe yekupfeka, PLA yekupfeka chena ruvara, Kraft kara, aluminium foil bepa mbiya uye ripple emadziro mapepa mapepa.
Iyi mbiya mbiya dzakanakira saradhi, muto, muriwo, michero uye mamwe marudzi ezvikafu akakodzera kurongedza mhando dzese dzeanodziya kana anotonhora echikafu. Nezve ruzivo rweyedu Salad bepa mbiya uyemuto bepa mbiya zvinotevera,
Shanghai COPAK Viwanda Co, LTD, yakavambwa muna 2010, ine hofisi yekutengesa muShanghai nefekitori muZhejiang. COPAK yaive yekutanga yakavambwa semupi wemapurasitiki mabhegi uye chikafu chekutakura firimu. Muna 2015, takatanga bhizinesi rePET makapu uye mabhodhoro ePET. Mazuva ano, zvigadzirwa zvakasvibirira zviri kutora kutariswa nevanhu. Copak tanga kushandisa zvinowanda uye zvakatipoteredza zvigadzirwa zvine hushamwari, senge RPET nePLA. Iye zvino COPAK zvakarePLA mabhodhoro anogadzira uye mugadziri wePCA mukombe.
Shanghai COPAK Viwanda CO., LTD yakavakirwa muShanghai, China, inyanzvi kambani yezvikafu mapakeji senge anonwa makapu, mabhodhoro ejusi, midziyo yekudya, midziyo yesaladi yePET uye PLA zvinhu.
Ichitaura nezveCOPAK's PLA zvigadzirwa zvinogadzirwa neshuga bagasse, chibage. Zvigadzirwa zvedu zvePLA zvinosanganisiraPLA makapu, Midziyo yezvokudya yePLA, mabhodhoro ePLA. Ivo anoshandiswa zvakanyanya nesupamaketi, inokurumidza cheni shopu, mabhawa, majuzi zvitoro uye zvichingodaro pakurongedza zvinotonhorera zvinwiwa zvakadai zvinwiwa, muto, smoothies, mukaka, tii, kofi, ice cream uye zvichingodaro.